Myat Shu - 2012 February
You are here : Myat Shu » Archives for February 2012
Published By Myat Shu On Friday, February 24th 2012. Under မျက်ရှု
စင်ပေါ်တက်ပြီး စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ အဆိုတော်တယောက်ကို ပန်းကုံးတက်စွပ်နေတဲ့ ကိုအောင့်ခြေလှမ်းတွေ ယိုင်နေပြီ။ ပန်းကုံးအထပ်လိုက် စွပ်လိုက်ချိန်၊ ဆလိုက်မီးရောင်တွေက သူ့လက်ပေါ်အကျမှာ နာရီကလား၊ လက်စွပ်တွေကလား မသိဘူး။ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက် လက်လက်တောက်တောက် အရောင်တွေ ထွက်လာတယ်။ စင်ပေါ်က ပြန်ဆင်းလာပြီး ရတနာတို့ စားပွဲဆီကို လျှောက်လာတဲ့ သူ့မျက်နှာပေးက ခေတ်ပေါ် လောကီဝန်းကျင်မှာ အသာစီးရကာ အောင်မြင်ကျေနပ်နေတဲ့ ပုံပန်းနဲ့။ ရတနာ စိတ်နှလုံး နောက်ကျိလာတယ်။ ရတနာ့ကို ဖေဖေ တချိန်တုန်းက မေးဖူးတာကို ရုတ်တရက် သွား အမှတ်ရမိတယ်။ ရတနာ နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲဖြေအပြီး ယုယုနဲ့အတူ ကိုအောင် အိမ်လာလည်တော့ ရန်ကုန်အိမ်မှာ ဖေဖေ ရောက်နေတယ်။ သူတို့ ပြန်သွားချိန်မှာ ဖေဖေက မေးပါတယ်။ ဘယ်သူ့သားသမီးလဲ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, February 22nd 2012. Under မျက်ရှု
သမ္မာအာဇီဝကိုမြိုချဖို့ ပြောင်းဆန်ထက်တောင် ဘာကြောင့် ကြမ်းရှတာလဲ အမှန်တရားအတွက်လွန်ဆွဲတိုင်း အဓမ္မသမားတွေပဲ ဘာကြောင့် နိုင်စားတာလဲ အင်အားကြီးသူတွေရဲ့ အတ္တစစ်ပွဲမှာအပြစ်မဲ့သူတွေရဲ့ သွေး၊ ချွေး၊ မျက်ရည်တွေ ဘာကြောင့် ချောင်းစီးနေတာလဲ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါသင့်မှ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ လမ်းစဉ်လိုက်သူတွေ ဆုံထဲထည့်ဆီညှစ်သလိုခိုင်းခံပြီးမှ နွားလိုရုန်းပြီး ကြောင်စာပဲစားရသူတွေ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆိတ်ဆိတ်နေပြီး အကြောက်တရားနဲ့ အသက်ရှင်နေသူတွေ မရှိကြ၊ မသိကြနဲ့ မတိမကျဘ၀တွေ အကျဉ်းစံ၊ အနင်းခံနဲ့ အရင်းပါမကျန်တဲ့ဘ၀တွေ မခိုးမရ၊ မရိုးကြနဲ့ မနိုးထနိုင်တဲ့ဘ၀တွေ ကျွန်မတို့မှာ ဆန်မရှိဘူး ကျွန်တော်တို့မှာ လယ်မရှိဘူး ငါတို့ကလေးတွေ ကျောင်းမနေဘူး တချို့လူတွေ ကြားနေ မြင်နေရက်နဲ့ ကန်းနေတယ် တချို့လူတွေ ပါးစပ်တွေဖွင့်ထားရက်နဲ့ နားတွေအနေတယ် တချို့လူတွေ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး မကြားဖူးတာတွေ ပြောတယ် လူပါးဝမှ ၀မ်းဝကြမယ်ဆိုလည်း ရှိစေတော့ ဘ၀င်ဆောင်မှ အနေချောင်မယ်ဆိုလည်း ရှိစေတော့ သာရာကူးမှ အခါထူးမယ်ဆိုလည်း ရှိစေတော့ မနေ့ကအကြောင်း စဉ်းစားရင် အသက်တစ်ခါ တိမ်းပါးတယ် ဒီကနေ့ကို ဖြတ်သန်းရင် အသက်တစ်ဝက်ပျက်တယ် မနက်ဖြန်ကိုတွေးရင် အသက်တစ်ရက်တိုတယ် ဒါနဲ့တောင် ဒီအသက် မထိရက်မကိုင်ရက် ဖက်နဲ့ အထပ်ထပ် ပတ်နေမိတယ်။ ယုပမ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၂ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, February 20th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
“ဘုန်းကြီးတို့ ဒကာ၊ ဒကာမတို့မှာ တကယ်တော့ ငါ၊ သူတပါး၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ မရှိ။ ၀ိဥာဉ်၊ နာမ်ရုပ်၊ သဠာယတန၊ ဖဿ၊ ဝေဒနာဆိုတဲ့ ခန္ဓာငါးပါးအစုကြီးပဲ ရှိတယ်။ အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ ရုပ်၊ နာမ်နှစ်ပါးပဲ။ ဒီတော့ အသေမဦးခင် ဥာဏ်ဦးအောင် အရင် ကြိုးစားရမယ်။ တရားရိပ်သာ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်မှာ သံသရာဝဲသြဃက လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းအတွက် ရသမျှ ကြိုးကုတ်ပြီး အားထုတ်လိုက်ကြစမ်းပါ။ ဒီလို နေရာဌာနကို ရောက်လာရတယ်ဆိုတာကိုက ပါရမီထူး ကုသိုလ်ထူးလို့ပေပဲ… သဘောပါကြကဲ့လား” “မှန်ပါ့ဘုရား” ပါးစပ်ကသာ မှန်ပါ့ဘုရား စကားလိုက်လိုက်ရသော်လည်း ဝေသီတယောက် မျက်ရည် ၀ဲနေပါပြီ။ ဒုက္ခတွေ့မှ ဘုရားတသည်မှာ လူတို့၏ သဘာဝပင်။ ထိုအခါမှသာလျှင် သံသရာမှ လွတ်မြောက်ချင်ပါပြီ၊ နိဗ္ဗာန်ကို ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, February 16th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု Tags: ၀တ္ထု, ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း, မျက်ရှု, မြန်မာ့ဓလေ့
ချိုးကူးသံသော်မျှ သဲ့သဲ့ကလေးသာ ကြားရပြီး ကန်စွန်းပင်လှ တစ်ရွာလုံး တိတ်ဆိတ်နေသည်။ သည်အချိန်တွင် ရွာလုံးကျွတ် ကြားလောက်အောင် ကျယ်လောင်သော အသံကြီးဖြင့် အော်ငိုလိုက်သူကား စံဝ၊ မိမှေးတို့၏ နို့ညှာသား ကျော်သူစံပေတည်း။ အကြီးမ လှလှရွှေနှင့် အလတ်ကောင် ရဲရင့်စံတို့ ကျောင်းသွားနေကြသည်။ အိမ်တွင် အမေ မိမှေး၊ နို့ညှာကောင် ကျော်သူစံနှင့် နို့စို့ကလေးသာ ရှိသည်။ စံဝလည်း လယ်ပြင်သို့ ရေမိုးကြည့်ရန် သွားနေသည်။ အိမ်ရှင်မများမှာ မည်သည့်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေရပါသည်ဟု မည်မည်ရရ ပြောစရာ မရှိငြား၊ မျက်စိနှစ်လုံး ပွင့်သည်မှ စ၍ လက်ချ မနေရ၊ အိပ်ချိန်သို့ ဆိုက်ရောက်သောကြောင့်သာ အိပ်လိုက်ရစေကာမူ လုပ်စရကား မကုန်။ မိမှေးလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း ဖြစ်သည်။ မိမှေး၏ အဖော်အလှော်ကား ကျော်သူစံ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, February 13th 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေး ရဲဝဏ္ဏ ဒီနှစ် ဇန်နဝါရီ (၂၂) ရက်နေ့က ဝါးခယ်မမြို့ကနေ ဇလပ်ထော် မြစ်လက်တက်လေးအတိုင်း ၁နာရီလောက် စက်လှေစီးပြီး သွားရတဲ့ ကျုံတိုင်ဆိုတဲ့ ရွာကလေးမှာ ဖေဖေတို့စာပေဟောပြောပွဲလေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ မြစ်ကလေးက ကွေ့ဝိုက်ထားတဲ့ ကျွန်းရွာကလေးပေါ့ သားရယ်၊ လမ်းပန်း အဆက်အသွယ်က ရေလမ်းတစ်ခုသာရှိပြီး သီးခြားရပ်တည်ရရှာတဲ့ ရွာကလေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် သားရယ် နောက်ကျကျန်ရစ် မနေရအောင် ရွာကလေးက ကြိုးစားရှာတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းခွဲကလေး ရှိတယ်။ အောင်ချက်မြင့်မားရေးအတွက် ဆရာ ဆရာမတွေနဲ့ ရွာရဲ့ အမိအဖတွေက စနစ်တကျ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေကြတာကို ဖေဖေတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အ.ထ.က ကျောင်းခွဲလေးမှာ နေ့ခင်းပိုင်း ဟောပြောပွဲလုပ်တော့ သားတို့အရွယ်တွေရော၊ သားထက် ကြီးတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ကိုကိုမမ အရွယ်တွေရော မှတ်စုစာအုပ်လေးတွေ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, February 1st 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
သရုပ်ဖော် - ကာတွန်းဝိသုကြုံ တမလွန်ဘ၀သို့ ပြောင်းရွှေ့သွားလေသူ ပြောင်းလဲရေးဝါဒီ ဗညားလဒ၏ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို အလွန်အမင်း သိလိုလှပါသည် ဟူ၍ ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ အမာဒိုင်နယ်၊ အပျိုကြီးကုန်း ကျေးရွာ၌ သီတင်းသုံး နေထိုင်တော်မူသော “ဆိတ်ဝှေးသင်း ဆြာကြီး ဥူးတက်တူ” က ကပိုကရိုထိုင်၍ နောက်ပြန် တောင်းပန်အပ်သောကြောင့် တောရကျောင်းတိုက်၌ ကပ္ပိယလုပ်ကာ သီတင်းသုံး နေထိုင်တော်မူသော ဗရုတ်သုတ်ခဘွဲ့ရ “ဗလောင်းဗလဲ ဆြာကြီး မောင်ကျပ်ခိုး” သည် သေလွန်သူ ဗညားလဒ၏ ဆန်းကြယ်ထူးခြားသည့် ဘ၀ဖြစ်ရပ်တို့အနက်မှ မှတ်သားဖွယ်ရာ အချင်းအရာ အနည်းငယ်ကို ထင်သလိုမြင်သလို ထုတ်နုတ်၊ သုတ်သင်၊ တည်းပြတ်ပြီးလျှင် နောက်လာနောင်သားတို့ လေ့လာဆင်ခြင်နိုင်စေရန် အလို့ငှာ ဤ “ဗညားလဒပုံပြင်” အမည်ရသော ... Continue Reading